Let's talk about IT: Linux Directory Structure
Linux system ကိုစလေ့လာမယ်ဆိုရင် Linux ရဲ့ directory structure ဟာ Windows နဲ့ လုံးဝကွဲပြားနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Windows မှာတုန်းကလို C: D: တွေလည်းမရှိတော့ သလို Windows directory လိုမျိုးလည်း ရှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။Windows မှာဆိုရင် ဒါကတော့ C:\_windows အောက်မှာ၊ ဒါဆိုရင်တော့ system32 အောက်မှာ ဆိုတာမျိုး ရင်းနှီးနေပေမယ့် Linux မှာဆိုရင်တော့ ဘယ်လို file တွေက ဘယ် directory အောက်မှာရှိတတ်တယ်ဆိုတာ စစချင်းမှာ ရှာဖို့ခက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဆို Linux မှာဘာတွေရှိလည်း၊ အဲဒါတွေက ဘာတွေလည်းဆိုတာ နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ရအောင်။ (Linux / Unix environment မှာ directory ဆိုတယ့် အသုံးအနှုန်းအစား File System လို့လည်းသုံးတတ်ပါတယ်။ )
Linux distribution အလိုက် တခြား directory တွေရှိတတ်ပေမယ့် ကျနော်တို့ Linux တိုင်းမှာပါတယ့် Generic ဖြစ်တယ့် directory တွေကို အဓိက ကြည့်ကြရအောင်။
Linux မှာdirectory( file system) တွေ အားလုံးက System Root directory လို့ခေါ်တယ့် '/' ကနေစပါတယ်။ System root directory ဖြစ်တဲ့ “/” အောက်ကနေ ကျန်တဲ့ directory တွေအားလုံး ဆက်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် /boot တို့ /etc တို့ဆိုပြီး '/' ရဲ့နောက်မှာ ဆက်ပြီးရေးကြတာပါ။ ( ဒါဆို '/' က C: ကြီးပေါ့လို့တော့ မထင်ပါနဲ့။ တူတာတွေရှိပေမယ့် မတူတာတွေလည်းရှိပါတယ်။) Linux ရဲ့ directory structure ကတော့
ဒီ directory ကတော့ Linux directory structure ရဲ့ အစမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ System Root directory လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွယ်တကူ root directory လို့ပဲခေါ်ကြတယ့် အတွတ် Root user ရဲ့ home directory ဖြစ်တယ့် /root နဲ့ ရောတတ်ကြပါတယ်။ ကျန်တယ့် directory တွေဟာ Root directory ( '/' ) ကနေမှ directory tree အဖြစ်ခွဲထွက်လာကြတာပါ။
Root directory ( '/' )က ပုံမှန်အားဖြင့် directory တွေစုထားတယ့် ပင်မ directory တစ်ခုပါ။ Root directory ( '/' ) ရဲ့ အောက်မှာ (/usr တို့ /bin တို့လို) directory တွေပဲရှိတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန် file တစ်ခုကို '/' အောက်မှာ ဖွဲ့စည်းလေ့မရှိပါဘူး။
Boot directory ကတော့ Operation system တစ်ခု boot တက်လာဖို့လိုအပ်တယ့် file တွေ သိမ်းစည်းထားတယ့် နေရာပါ။ /boot directory ရဲ့ အောက်မှာ Boot loader လို့ခေါ်တယ့် Grub တို့ lilo တို့ရဲ့ config file တွေ၊ Kernel image တွေ initrd file တွေရှိပါတယ်။
System binary directory ပါ။ ဒီ /sbin directory မှာ System administrator တစ်ယောက်အတွက် လိုအပ်မယ့် command တွေ binary တွေကိုထားပါတယ်။ /sbin အောက်မှာရှိတယ့် တစ်ချို့ command တွေကို System Administrator ကသာ Access လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ Harddisk ကို partition ပိုင်းတယ့် fdisk တို့ ၊ format ချတယ့် mkfs command တွေကို /sbin အောက်မှာထားပါတယ်။ /sbin ရဲ့ ပုံစံတူ နောက်ထပ် directory တစ်ခုကတော့ /usr/sbin directory ပါ။ Administrator တွေပဲသုံးရတယ့် useradd / userdel / groupadd တို့လို command မျိုးတွေ ထားပါတယ်။
User တွေအားလုံး နေ့စဉ် အသုံးပြုနေတယ့် binary ( commands) တွေကို /bin directory အောက်မှာထားပါတယ်။ cp / mv / rm / ls တို့လို command တွေအပြင် SHELL တွေဖြစ်တယ့် bash တို့ csh တို့ကိုနဲ့ ဆိုင်တယ့် binary တွေကို /bin directory ထဲမှာ ထားပါတယ်။
Editable Text Configuration directory လို့ ဆိုတယ့် အတိုင်း System မှာရှိတယ့် services တွေရဲ့ configuration file တွေကို /etc directory ထဲမှာ ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ Hostname configuration အတွက် hosts file တို့၊ DNS server address မှတ်တယ့် resolve.conf တို့လို configuration file တွေအပြင်၊ GUI windows အတွက် လိုအပ်တယ့် X11 ရဲ့ configuration တွေလည်းရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ System ပေါ်ကို တစ်ခြား application တွေ တင်မယ်ဆိုရင် ၊ ဆိုကြပါဆို့ Apache တို့ MySQL server တို့ တင်မယ်ဆိုရင် Apache service အတွတ် Mysql-server service အတွက် လိုအပ်တယ့် Configuration file တွေကို /etc အောက်မှာ /etc/apache2 စသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ sub-directory အောက်မှာ ထားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
User တွေရဲ့ home directory ပါ။ User တစ်ယောက်ချင်းအတွက် /home directory ရဲ့အောက်မှာ username နဲ့ sub-directory တစ်ခုဆီ တည်ဆောက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ (ဥပမာ၊ divinity ဆိုတယ့် user အတွတ် /home/divinity ဆိုတဲ့ directory ကိုဆောက်ပေးမှာဖြစ်ပြီး user 'divinity' ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် home directory အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)User တစ်ယောက်ရဲ့ home directory ကို တစ်ခြား user တစ်ယောက်က ဝင်ကြည့် ဝင်ပြင် လုပ်လို့မရအောင် လုပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ User တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Environmental variable / parameter တွေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ User ရဲ့ home directory အောက်မှာ သက်မှတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီ directory ကို directory tree ရဲ့ အစဖြစ်တယ့် System Root directory ( '/' ) နဲ့ ရောတတ်ကြပါတယ်။ ဒီ /root directory က Linux system တွေရဲ့ SuperUser ဖြစ်တယ့် root user ရဲ့ home directory ဖြစ်ပါတယ်။ System root directory ( '/' ) နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပဲ System root ရဲ့အောက်မှာ ဒိုက်ရိုက်ရှိနေတယ့် directory တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။
Linux system နဲ့ သူ့ရဲ့ Program တွေက အသုံးပြုမယ့် library files တွေထားတယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Library file ဆိုတာ Windows မှာ ဆိုရင်တော့ DLL file တွေနဲ့ တူပါတယ်။
User application တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ file တွေကို ထားတယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ User တွေအသုံးပြုမယ့် telnet တို့ ftp တို့အတွတ် binary တွေ configuration တွေကို /usr အောက်က သက်ဆိုင်ရာ sub-directory တွေထဲမှာ ထားပါတယ်။ ( ဥပမာ၊ တကယ်လို့ Apache ကို install လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် Apache configuration file က /etc အောက်ကိုရောက်နေပေမယ့် ကျန်တယ့် Apache module တွေက /usr အောက်မှာ ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ )
ဒီ directory ကတော့ Spooling လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ့် data တွေကို ထားတယ့် နေရာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Variable data directory လို့ခေါ်တယ့် အတိုင်း အမြဲတန်းပြောင်းလဲနေတယ့် file တွေပါ။ Printer deamon ရဲ့ printer spool လိုမျိုးတွေ၊ Mail server တွေရဲ့ mailbox တွေ mail queue တွေကို /var အောက်မှာထားပါတယ်။ Linux system ရဲ့ system log file တွေကိုလည်း /var/log directory ထဲမှာ ထားလေ့ရှိပါတယ်။ System မှာ run နေတယ့် service တွေနဲ့ system ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးနည်းပါးကို /var/log အောက်မှာ သက်ဆိုင်ရာ log file တွေနဲ့ မှတ်ပါတယ်။
User တိုင်း Service တိုင်း everyone full permission ရတယ့် directory တစ်ခုပါပဲ။ Service တွေအတွက် လိုအပ်တယ့် temporary file တွေကို /tmp directory ထဲမှာ ထားလေ့ရှိပါတယ်။ /tmp ထဲက temporary file တွေကို အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုနဲ့ဖြစ်စေ၊ Program ကအသုံးပြုပြီးသွားရင် သူ့အလိုအလျောက်ဖြစ်စေ၊ system reboot မှာဖြစ်စေ ရှင်းပြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
Linux system ရဲ့ အထူးစမ်းဆုံး directory ပါ။ Computer မှာရှိနေတယ့် hardware တွေကို file တွေအဖြစ်နဲ့ ပြထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ /dev/cdrom, /dev/fd0 အစရှိသဖြင့် computer ရဲ့ CDrom device နဲ့ floppy device ကို ကိုယ်စားပြုတယ့် file တွေ ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ IDE hard drive တွေကို ပထမ hard drive ကို /dev/hda၊ ဒုတိယ hard drive ကို /dev/hdb အစရှိသဖြင့်၊ SATA, SCSCI drive တွေကို /dev/sda , /dev/sdb အစရှိသဖြင့် ကိုယ်စားပြုလေ့ရှိပါတယ်။ /dev directory မှာရှိတယ့် file တိုင်းဟာ read နိုင် write နိုင်ပြီး hardware device တွေကို direct communicate လုပ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် /dev/dsp ဆိုတယ့် file ဟာ system speaker ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ Speaker file ကို တစ်ခုခုရေးကြည့်ရအောင်။ echo "Hello testing" >> /dev/dsp လို့ command ရိုက်ရင် speaker က အသံတစ်မျိုးထွက်ပါလိမ့်မယ်။ (Hello Testing လို့တော့ မဟုတ်ဖူးပေါ့ဗျာ။ /dev အောက်က fileတွေကို read / write လုပ်ချင်းအားဖြင့် hardware device တွေကို access လုပ်တယ်ဆိုတာ သိစေရုံ သက်သက်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
Linux system တွေရဲ့ Generic mount point ဖြစ်ပါတယ်။ Default မှာတော့ directory အလွတ်ကြီးတစ်ခုပါ။ ဥပမာ pen drive လေးတပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် တကယ်လို့ pen drive ကို detect ဖြစ်မယ်ဆိုရင် Linux က /mnt အောက်မှာ mount point တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ /mnt/FAT ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အဲဒီ /mnt/FAT ကို ဖွင့်ကြည့်ရင် ကိုယ့် pen drive ထဲက file တွေကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ device တွေကို manual mount လုပ်ပေးရရင်လည်း Generic အနေနဲ့ /mnt အောက်မှာပဲ mount လုပ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
Linux ရဲ့ ထူးစမ်းတဲ့ file system / directory နောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ /proc directory ဟာ ဘယ် hardware media ပေါ်မှာမှ မရှိပါဘူး။ Virtual memory ထဲမှာ ယာယီတည်ဆောက်ထားတယ့် directory တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Operation system ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ (Current state) ကိုဖော်ပြတယ့် file တွေကို tree structure တစ်ခုလို directory အဆင့်ဆင့်နဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလည်းနေနိုင်တယ့် filesystem တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ /proc အကြောင်း အသေးစိတ်ကတော့ ဒီ URL ကို ညွှန်ပါရစေ
Unix standard directory တစ်ခုဖြစ်ပြီး Linux system တွေမှာ အသုံးနည်းတဲ့ directory တစ်ခုပါ။ Default installation တုန်းက မပါခဲ့တယ့် system / operation system နဲ့လည်း မသက်ဆိုင်တယ့် Application တွေကို /opt အောက်မှာ install ကြလေ့ရှိပါတယ်။ Linux distribution အများဆုကတော့ /usr ကို ပိုအသုံးများပြီး /opt ကို သိပ်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။
ဒီ directory structure အကြောင်း ဒီတိုင်းဖတ်ရင် နည်းနည်း ခေါင်းနောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Linux computer တစ်လုံးနဲ့ ယှဉ်ပြီး ကြည့်ရင် အလွန်လွယ်လွယ်ကူကူ သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ Linux community တွေမှာ ပြောလေ့ရှိတယ့် စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ 'Get your hands dirty'။ လက်တွေ့လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းတယ့် idiom တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ရင်း နားလည်လာရင် Linux installation လုပ်ကတည်းက ကိုယ်က ဒီ linux box ကို ဘာ အတွက်အသုံးပြုမလည်း ဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး partitioning ကို လိုသလို partition ပိုင်းပြီး ပိုကောင်းတယ့် read / write speed ကို လည်း ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Linux system တစ်ခုအတွက် partitioning stage အကြောင်းကိုလည်း နောက် doc တစ်ခုမှာ ရေးဖို့ကြိုးစားပါမယ်။ Guide line ဆိုတာမျိုးထက် partitioning အကြောင်းရှင်းပြရင်းနဲ့ ဘယ်လို server မျိုးအတွက် ဘယ်လို partition scheme မျိုးထားသင့်တယ်ဆိုတာမျိုး ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Divinity at 11:24 PM
Labels: Divinity, Linux
ကြိုဆိုပါတယ် ..လင့်ထားပရစေ ၊ Network နဲ့Linux အပိုင်းကိုတော့ အမြဲအားပေးမလို့ ပါ။
Thanks. all are full of knowledge.
အူဘွန်တု တစ်ခါတင်ပါတယ် ... မွတ်စလင်အဒီးရှင်တင်မိလို့ ဟာလာ အူဘွန်တု တံဆိပ်နဲ့တက်တက်လာတယ် ....။
Effect တွေ ဂွမ်းတယ်ဆိုလို့ စမ်းလိုက်တာ ... နောက်တော့ သူတို့တွေက free ရပေမယ့် တစ်ချို့အပိုင်းတွေမှာ နည်းနည်း crude ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ smooth မဖြစ်သေးတာတွေ့ရတယ်။ workspace ကြီးဗဟုဂံလို လည်နေတာတော့ သဘောကျတယ်။
CentOS ကိုတော့ Server မှာ သုံးဖူးတယ်။ Suse ထက်တော့ ပိုအဆင်ပြေပြီး Stable ဖြစ်တယ်လို့ ကိုယ်တွေ့သိလိုက်ရတယ်။
Linux နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ တစ်ကြောင်းတိတိ သိတယ်။
အော် နှစ်ကြောင်းသိတာ ...။ နောက်တစ်ခုက bash
အဲဒီလို မသိရင် ခဏခဏပြန်မေးမေးနေရတဲ့ linux for idiots ဖြစ်ဖြစ် ...၊ linux in ကိုမောင်ဆင့် (common sense) ဖြစ်ဖြစ်ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါဆို command တွေလည်း တစ်စုတစ်စည်းထဲရှိသွားမယ် ... လေ့လာရတာလည်း လွယ်သွားမယ်လို့ ထင်တယ်။
ရုံးက guide မှာ ပြန်ရှာရတာထက် Blog မှာ ပြန်ဖတ်လိုက်ရတာ ပိုမြန်မယ်လို့ ထင်တယ်။ :P
Server Clustering ဆိုတာ . . . (1)